လကျတှေ့ ပို့ ခသြူ – My Blog
လကျတှေ့ ပို့ ခသြူ
ကိုပှကွီး ထံသို့လူပြိုပေါကျ ခြာတိတျ င အောငျ နှငျ့ င စိုး တို့အလာစိပျနသေညျ။ ည တိုငျး ရောကျလာ၊ ကိုပှကွီး ရှီးသမြှနားထောငျ ၊ ၁၀ နာရီလောကျမှ ပွနျကွ တော့ကှာ ဆိုမှ ဒယိ ဒရှတျ ထ ပွနျသညျ။ ကိုပှကွီး က အ ရှီးကောငျးသညျ။ ဟို အ နောကျ ပိုငျးက ကောငျ မကွီး– သိတယျ မို့လား။ အပြိုဘဝက ငါ ခနခန တကျ အုပျနကွေ ပေါ့။ အရမျးကောငျးသကှ။ အောကျက နေ ကော့ ကော့ပေးတာမြားကှာ ရကျစကျတယျ။ ပွီးတော့ ရှာလယျက ဖွူဖွူ ခြောခြော – လညျး ငါ သုံးခြီ တိတိ ဆျောဘူးတယျ။ တညက ငါ မူးမူးနဲ့ လေးဘကျ ကုနျးခိုငျးပွီး နှာထညျ့လိုကျတာ ကောငျ မ ငိုယူရ တယျ့။ သညျ ရှာမှာ ကိုပှကွီး လုပျဘူးတဲ့ မြားလှ၏။ င အောငျ ငစိုးတို့က သူ့ကို အထငျကွီး နကွေ သညျ။
လူပြိုပေါကျစ တှေ ဆိုတော့ ဒီလိုစကား မြိုးတှကေို လှတျ နားထောငျခငျြ သညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး သူတို့နှဈယောကျက ညစဉျ လာတိုငျး ကိုပှကွီးကွိုကျတတျသော ထနျးရေ နှငျ့ အမဲသားခွောကျ ဖုတျက လေး ပါ ယူလာပွီး လာဘျထိုးကွ၏။ ဒီမှာ လူပြို့လကျ ဝကျမွီး တဲ့ကှ။ မငျးတို့အရှယျ လူပြိုပေါကျ ဆိုတာ သှကျနရေ တယျ။ ည အ မှောငျ ထဲ ကောငျ မ တှရေ့ငျ ဘိုး ဘတျ ဆို ဝငျ လုံး။ နို့တှေ ဘာတှေ ကိုငျ။ ပေါငျ ကွား နှိုကျ ။ မ အျောဘူးရယျ။ အိုကေ လို့က တော့ သ ဘောရှိ နှံ ပေ တော့။ ဟီ ဟီ။ ထို့နောကျ သူတို့နား ကပျ၍ တိုးတိုးလေး ဟိုဘကျအိမျက အပြိုမ တရှငျး နိပျလိုကျတာကှာ။ အကွီးမက နို့ကွီးတှေ အယျနတောဘဲ။ အငယျမ ကတြော့ ဖငျကွီးတယျ။ ခုံ ကောငျးတယျ။ ဒါမြိုး ဆျောလို့ တအားကောငျးပေါ့။
ညည သူတို့၂ ယောကျထဲ အိပျကွတာကှ။ သူတို့အ မေ အဘှားကွီးက မကျြစေ့ မှုနျ၊ နား မ ကောငျးတော့ဘူး။ ငါ ငယျငယျက ဆို ဒါမြိုး ဝငျ တှယျပွီးတာ ကွာပေါ့။ မငျးတို့ညံ့လှနျးတယျ။ သညျအခိုကျ ခွငျထောငျ ထဲအိပျနေ သော သူ့ မိနျးမ မမစိနျ ထှကျလာ၏။ ကိုပှကွီး။ တျော က လေးတှကေို မဟုတျ တရုပျ ဘာတှေ မွှောကျပေးနတောလဲ။ တျောကွာ ဗယု တျသုတျခ လုပျ ရငျ ကြုပျတို့ပါသကျသလေိုကျနေ ရဦးမယျ။ အိမျခငျြးက စညျးရိုးလေး ခွားတာ။ သှား သှား ကောငျလေးတှပွေနျကွ တော့။ နောကျ ၅ ရကျကွာ။ လကှယျည။ င အောငျ နဲ့ ငစိုး ခြောငျ ကသြော တ နရောမှာ တီးတိုး တိုငျ ပငျနေ၏။
င အောငျ က ငစိုးထကျ ၁ နှဈကွီးသညျ။နဲနဲလညျး သတ်တိ ပိုကောငျး၏။ ဟကေ့ောငျ ။ ငါ ဒီည အကွီးကောငျ မ ကွီး ဝငျ ဆျော မယျ။ အဲဒါ မငျးလညျး လိုကျခဲ့။ ငစိုးက ” ဟာ မလိုကျ ရဲပါဘူးကှာ။” အေ ပေး။ င ကွောကျ။ မငျးက အခနျးထဲ လိုကျ မ ဝငျ ရပါဘူးကှ။ အိမျခါးပနျးအပွငျ က စောငျ့ပေး ရုံပါ။ တကယျလို့ ငါက အိုကေ ရငျ အငယျ မကို မငျး ဝငျ ဆျောပေါ့။ ဒါမြိုးက တ ယောကျ ခံနရေငျ နောကျ တ ယောကျလညျး ခံခငျြ လာတာဘဲတဲ့။ ငစိုးလညျး င အောငျ့ကို ကွောကျတာကွောငျ့ရော ခြောငျး နားထောငျ ခငျြ တာကွောငျ့ရော ခေါငျး ညိတျလိုကျပါသညျ။
ည ၁၀ နာရီကြျောလောကျ တရှာလုံး အိပျခြိနျ တှငျ င အောငျ သညျ အိမျစညျးရိုး ကို ကြျောနငျး ကာ အိမျဝငျးထဲဝငျ၏။ ငစိုးကား နောကျလိုကျ။ သူ့စိတျထဲ၌ င အောငျ သညျ တကယျ့သူရဲကောငျး။ အပြိုမ နှဈယောကျ အိပျခနျးနား ခွသေံလုံလုံ ကပျ သှားနိုငျကွ၏။ င အောငျ က ကြှမျးကငျြ စှာ ကပျထ ရံ ကို ဖွဲ၍ အထဲဝငျ လေ၏။ ငစိုးကား ကွောကျ၍ တုနျနသေညျ။ အသကျပွငျးပွငျးပငျ မရှူဝံ့။ ၅မိနဈလောကျကွာတော့ အခနျးထဲက ဂုံးဂုံးဂှမျး ဂှမျး အသံတှေ ထှကျလာသညျ။ အကွီးကောငျ မ၏ ဆဲသံပျေါလာသလို တခုခုနဲ့ပေါကျလိုကျ၍ ထရံကို ဘုနျး ကနဲလာမှနျသညျ။ မကွာ ကပျပေါကျကို ဗငျြးကနဲ ဆောငျ့တိုးကာ င အောငျပွေးထှကျလာ၏။ မဟနျဘူးဟေ့ ။ ပွေးတော့ ။ လို့ငစိုးကို ပွောပွီး သူက ဝငျးတံခါးဆီ ပွေးထှကျသှားသညျ။ ငစိုးကား လဲသလေုအောငျ ကွောကျခပြွေီ။ အ ဝေးရှိ ဝငျးပေါကျဆီထိ မ ပွေးဝံ့ သဖွငျ့ နီးရာ ကိုပှကွီး အိမျ ဘကျသို့ဆူးစညျးရိုးကို တိုး၍ပွေး ရပါခသြေညျ။
ကိုပှကွီး အိမျ က အကာအရံ မလုံသညျမို့အိမျ ထဲ ထိဝငျ ၊ ကုတငျ အောကျ စှတျတိုး၏။ ဟဲ့။ ဘသူလဲ။ ကိုပှကွီး မိနျးမ မမစိနျ၏ တိုးတိုးအသံ။ အ အမ ။ ကနြျော ငစိုးပါ။ ဟိုကောငျ့။ တျောတော့ ငါသိပွီ။ နငျ တို့ကိုပှ မရှိဘူး။ သူ့ညီ အလှူ ထမငျးခကျြ ညအိပျ သှားတယျ။ လာ ဒီအထဲ လာပုနျး။ အဲဒီ ဆိုရငျ ဟိုက မီးနဲ့ထိုး ရှာရ ငျ မွငျ လိမျ့မယျ။ ငစိုး ကွောကျ နပွေီ။ င အောငျ လို အ ဝေးထိ မ လဈခဲ့မိတာ မှားပွီ။ မတတျနိုငျ ။ မမစိနျ ခွငျထောငျ ထဲ ဝငျ ပုနျးရ လပွေီ။ ဟိုဘကျအိမျဆီက လကျနှိပျမီးရောငျ တဝငျးဝငျး မွငျ ရ၏။ မမစိနျ အဲသညျဘကျ ဘသူလာလဲ။ တှမေိ့လား။ မမစိနျက အိပျမှုံစုံမှား အသံနဲ့။ ဟဲ့ ဘသူမှ မလာဘူး။ နငျတို့တောငျ ဘကျ တံခါး ဆီ က တော့ ခြှမျး ကနဲကွားတယျ။ ညီမ နှဈယောကျ တံခါးဆီ သှားကွညျ့ကွသညျ။အငယျမက လကျထဲမှာ ဝါးရငျးတုတျကွီးနှငျ့။ သူတို့ညီအမက လှမျးမေးတော့ မမစိနျ က ငစိုး ကို သူမ စောငျခွုံထဲ ဆှဲ သှငျးလိုကျပွနျသညျ။ လှမျး ထိုးလိုကျသော မီးရောငျဖွှငျ့ မမစိနျ၏ ဖွူဖှေး ကွီး မားသော နို့ကွီး နှဈလုံးကို ငစိုး မကျြ နှာနှငျ့ ကပျ လကျြ မွငျ လိုကျ ရသညျ။
ငစိုး မလှုပျဝံ့ပါ။ အပြို ညီအမ တရားခံကို မမိ၍ စိတျလြှော့ ပွနျအိပျ သှားကွ ပမေဲ့ ငစိူးက တော့ မမစိနျ စောငျခွုံထဲမှာ ခြှေးပွနျလကျြ။ မမစိနျက သူ့ကို ရငျ ခှငျ ထဲ ဆှဲသှငျးပွီး ကွောကျနတေုနျးဘဲလား။ မမကို ပွနျဖကျထားလေ တဲ့။ ပွောရငျး ငစိုးလကျကို ဆှဲကာ သူမ ကိုယျပျေါ တငျ ပေးသညျ။ မမစိနျ ကိုယျပျေါ အဝတျအစားမရှိ။ အိပျတုနျးက ရငျ လြားထားသော လုံခညျြသညျ ကြှတျကသြှား သညျလား ခြှတျခြ လိုကျတာလား မသိ။ တုနျယငျနေ သော ငစိုးလကျကို သူမကဘဲ ကိုငျ၍ သူမ ဖငျကွီးပျေါ တငျပေးလိုကျပွနျသညျ။ငစိုး မရဲ တရဲ လကျနှငျ့ ဆုပျကိုငျ၏။
နှေးထှေး နူးညံ့သျော လညျး တငျးလှသညျ။ မမစိနျ က ငစိုးခေါငျးကို သူမ နို့ကွီး တှကွေားဆှဲ သှငျး ဖိကပျလိုကျပွနျတော့ ငစိုး ပါးစပျက နို့သီးတ ခုနှငျ့ ထိ၏။ မစို့ရဲ။ မမစိနျကဘဲ ပါးစပျပေါကျ တေ့ ပေးပွနျသညျ။ စို့လေ မောငျ လေးရဲ့။ ဘာလဲ မကွိုကျဘူးလား။ ခဈ ခဈ မငျးက မခုတျတတျတဲ့ ကွောငျလေးပေါ့။ မမစိနျက သူ့ပုဆိုးကို ခြှတျပွီး ပေါငျကွားကဟာ ကို ကြှမျးကငျြ စှာကိုငျ သညျ ။ ထ အောငျ ဆှသညျ။ အာ အား ။ ငစိုး လူးခါသှား၏။ ကောငျးလိုကျတာ မမရယျ။ မမစိနျသညျ ပေါငျ တ ခြောငျးကို ငစိုးပျေါတငျပွီး ငစိုးဟာကို သူမ ဟာထဲ ဘေးစောငျးမှာပငျ ရ အောငျ ထညျ့ပေးသညျ။
ထို့နောကျ ငစိုးကို ပှဖေ့ကျ လကျြ ပကျလကျလှနျ ရငျး သူမက အ ပျေါက ရောကျစေ သညျ။ တပျလကျြ ဝငျ လကျြ အ နအေထားမပကျြ။ မမစိနျ က အ ပျေါက တကျလိုကျသဖွငျ့ ငစိုးဟာ က မမစိနျဟာထဲအဆုံးထိမွုပျဝငျ သှားပွီး ပိုကောငျး လာသညျ။ မမစိနျက အရမျးကို ကောငျးနေ အောငျပေးသညျ။ အ ပျေါက ဆောငျ့နရေငျး ဘေးတိုကျ ၊ ပတျလညျ လှညျ့သညျ။ ငစိုးက မ နနေိုငျ ၍ ပွနျပငျ့သှငျးတော့ ဟဲ့။ အသာငွိမျနေ ။ မငျ့က ပွီးသှားလိမျ့မယျ။ မမ ကဘဲ လုပျပေးမယျ ဟုဆိုသညျ။ ထို့နောကျ စိတျတိုငျးကြ အပီအပွငျ လုပျပေး၏။ အထိုငျ ခြိနျမှာ ငစိုးဟာကွီး တ ခြောငျးလုံး မွုပျဝငျ သှားသညျ မှာ အောကျ က ခုံတောငျ လိုကျဝငျ မလို ထငျ ရသညျ။ ကောငျးလိုကျတာ မမ ရယျ။
အရမျးကို ကောငျးနေ ပွီ။ မမစိနျက ငစိုးလကျတှကေို ဆှဲယူကာ သူမ နို့ကွီး တှေ ကိုငျခိုငျး၊ အသီးလေးတှကေို လကျညှိုးလကျ မ ညှပျ၍ ဖှဖှ ခစြေသေညျ။ နှဈယောကျသား မ မြှျောလငျ့ဘဲ တှသေ့ောဂှငျ မှာ အသညျးအသနျ မီးကုနျယမျးကုနျ ခဈြလိုကျ ကွသညျ။နာရီဝကျလောကျကွာတော့ ငစိုးက အရငျ၊ မမစိနျက နောကျ ဆကျတိုကျပွီး၏။ ငစိုးက ပွနျခါနီး မမစိနျကို တအားဖကျ ကဈ ပေးရငျးမမရယျ။ မမသငျ တာက ကိုပှကွီးသငျ တာထကျအရမျး အရမျးကို ပိုကောငျးတာဘဲ။ ဟုပွောသညျ။ မမစိနျက မကျြစောငျးထိုး၍ အျော ! မငျ့ မို့ပွောတတျတယျ။ ဒီက လကျတှေ့ အရညျလညျအောငျ ကိုယျဖိရငျ ဖိ သငျ ပေးရတဲ့ ဟာကို ခိခိ။ …ပွီးပါပွီ
လက်တွေ့ ပို့ ချသူ
ကိုပွကြီး ထံသို့လူပျိုပေါက် ချာတိတ် င အောင် နှင့် င စိုး တို့အလာစိပ်နေသည်။ ည တိုင်း ရောက်လာ၊ ကိုပွကြီး ရွှီးသမျှနားထောင် ၊ ၁၀ နာရီလောက်မှ ပြန်ကြ တော့ကွာ ဆိုမှ ဒယိ ဒရွတ် ထ ပြန်သည်။ ကိုပွကြီး က အ ရွှီးကောင်းသည်။ ဟို အ နောက် ပိုင်းက ကောင် မကြီး– သိတယ် မို့လား။ အပျိုဘဝက ငါ ခနခန တက် အုပ်နေကြ ပေါ့။ အရမ်းကောင်းသကွ။ အောက်က နေ ကော့ ကော့ပေးတာများကွာ ရက်စက်တယ်။ ပြီးတော့ ရွာလယ်က ဖြူဖြူ ချောချော – လည်း ငါ သုံးချီ တိတိ ဆော်ဘူးတယ်။ တညက ငါ မူးမူးနဲ့ လေးဘက် ကုန်းခိုင်းပြီး နွှာထည့်လိုက်တာ ကောင် မ ငိုယူရ တယ့်။ သည် ရွာမှာ ကိုပွကြီး လုပ်ဘူးတဲ့ များလှ၏။ င အောင် ငစိုးတို့က သူ့ကို အထင်ကြီး နေကြ သည်။
လူပျိုပေါက်စ တွေ ဆိုတော့ ဒီလိုစကား မျိုးတွေကို လွှတ် နားထောင်ချင် သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်က ညစဉ် လာတိုင်း ကိုပွကြီးကြိုက်တတ်သော ထန်းရေ နှင့် အမဲသားခြောက် ဖုတ်က လေး ပါ ယူလာပြီး လာဘ်ထိုးကြ၏။ ဒီမှာ လူပျို့လက် ဝက်မြီး တဲ့ကွ။ မင်းတို့အရွယ် လူပျိုပေါက် ဆိုတာ သွက်နေရ တယ်။ ည အ မှောင် ထဲ ကောင် မ တွေ့ရင် ဘိုး ဘတ် ဆို ဝင် လုံး။ နို့တွေ ဘာတွေ ကိုင်။ ပေါင် ကြား နှိုက် ။ မ အော်ဘူးရယ်။ အိုကေ လို့က တော့ သ ဘောရှိ နှံ ပေ တော့။ ဟီ ဟီ။ ထို့နောက် သူတို့နား ကပ်၍ တိုးတိုးလေး ဟိုဘက်အိမ်က အပျိုမ တရှင်း နိပ်လိုက်တာကွာ။ အကြီးမက နို့ကြီးတွေ အယ်နေတာဘဲ။ အငယ်မ ကျတော့ ဖင်ကြီးတယ်။ ခုံ ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုး ဆော်လို့ တအားကောင်းပေါ့။
ညည သူတို့၂ ယောက်ထဲ အိပ်ကြတာကွ။ သူတို့အ မေ အဘွားကြီးက မျက်စေ့ မှုန်၊ နား မ ကောင်းတော့ဘူး။ ငါ ငယ်ငယ်က ဆို ဒါမျိုး ဝင် တွယ်ပြီးတာ ကြာပေါ့။ မင်းတို့ညံ့လွန်းတယ်။ သည်အခိုက် ခြင်ထောင် ထဲအိပ်နေ သော သူ့ မိန်းမ မမစိန် ထွက်လာ၏။ ကိုပွကြီး။ တော် က လေးတွေကို မဟုတ် တရုပ် ဘာတွေ မြှောက်ပေးနေတာလဲ။ တော်ကြာ ဗယု တ်သုတ်ခ လုပ် ရင် ကျုပ်တို့ပါသက်သေလိုက်နေ ရဦးမယ်။ အိမ်ချင်းက စည်းရိုးလေး ခြားတာ။ သွား သွား ကောင်လေးတွေပြန်ကြ တော့။ နောက် ၅ ရက်ကြာ။ လကွယ်ည။ င အောင် နဲ့ ငစိုး ချောင် ကျသော တ နေရာမှာ တီးတိုး တိုင် ပင်နေ၏။
င အောင် က ငစိုးထက် ၁ နှစ်ကြီးသည်။နဲနဲလည်း သတ္တိ ပိုကောင်း၏။ ဟေ့ကောင် ။ ငါ ဒီည အကြီးကောင် မ ကြီး ဝင် ဆော် မယ်။ အဲဒါ မင်းလည်း လိုက်ခဲ့။ ငစိုးက ” ဟာ မလိုက် ရဲပါဘူးကွာ။” အေ ပေး။ င ကြောက်။ မင်းက အခန်းထဲ လိုက် မ ဝင် ရပါဘူးကွ။ အိမ်ခါးပန်းအပြင် က စောင့်ပေး ရုံပါ။ တကယ်လို့ ငါက အိုကေ ရင် အငယ် မကို မင်း ဝင် ဆော်ပေါ့။ ဒါမျိုးက တ ယောက် ခံနေရင် နောက် တ ယောက်လည်း ခံချင် လာတာဘဲတဲ့။ ငစိုးလည်း င အောင့်ကို ကြောက်တာကြောင့်ရော ချောင်း နားထောင် ချင် တာကြောင့်ရော ခေါင်း ညိတ်လိုက်ပါသည်။
ည ၁၀ နာရီကျော်လောက် တရွာလုံး အိပ်ချိန် တွင် င အောင် သည် အိမ်စည်းရိုး ကို ကျော်နင်း ကာ အိမ်ဝင်းထဲဝင်၏။ ငစိုးကား နောက်လိုက်။ သူ့စိတ်ထဲ၌ င အောင် သည် တကယ့်သူရဲကောင်း။ အပျိုမ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်းနား ခြေသံလုံလုံ ကပ် သွားနိုင်ကြ၏။ င အောင် က ကျွမ်းကျင် စွာ ကပ်ထ ရံ ကို ဖြဲ၍ အထဲဝင် လေ၏။ ငစိုးကား ကြောက်၍ တုန်နေသည်။ အသက်ပြင်းပြင်းပင် မရှူဝံ့။ ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ အခန်းထဲက ဂုံးဂုံးဂွမ်း ဂွမ်း အသံတွေ ထွက်လာသည်။ အကြီးကောင် မ၏ ဆဲသံပေါ်လာသလို တခုခုနဲ့ပေါက်လိုက်၍ ထရံကို ဘုန်း ကနဲလာမှန်သည်။ မကြာ ကပ်ပေါက်ကို ဗျင်းကနဲ ဆောင့်တိုးကာ င အောင်ပြေးထွက်လာ၏။ မဟန်ဘူးဟေ့ ။ ပြေးတော့ ။ လို့ငစိုးကို ပြောပြီး သူက ဝင်းတံခါးဆီ ပြေးထွက်သွားသည်။ ငစိုးကား လဲသေလုအောင် ကြောက်ချေပြီ။ အ ဝေးရှိ ဝင်းပေါက်ဆီထိ မ ပြေးဝံ့ သဖြင့် နီးရာ ကိုပွကြီး အိမ် ဘက်သို့ဆူးစည်းရိုးကို တိုး၍ပြေး ရပါချေသည်။
ကိုပွကြီး အိမ် က အကာအရံ မလုံသည်မို့အိမ် ထဲ ထိဝင် ၊ ကုတင် အောက် စွတ်တိုး၏။ ဟဲ့။ ဘသူလဲ။ ကိုပွကြီး မိန်းမ မမစိန်၏ တိုးတိုးအသံ။ အ အမ ။ ကျနော် ငစိုးပါ။ ဟိုကောင့်။ တော်တော့ ငါသိပြီ။ နင် တို့ကိုပွ မရှိဘူး။ သူ့ညီ အလှူ ထမင်းချက် ညအိပ် သွားတယ်။ လာ ဒီအထဲ လာပုန်း။ အဲဒီ ဆိုရင် ဟိုက မီးနဲ့ထိုး ရှာရ င် မြင် လိမ့်မယ်။ ငစိုး ကြောက် နေပြီ။ င အောင် လို အ ဝေးထိ မ လစ်ခဲ့မိတာ မှားပြီ။ မတတ်နိုင် ။ မမစိန် ခြင်ထောင် ထဲ ဝင် ပုန်းရ လေပြီ။ ဟိုဘက်အိမ်ဆီက လက်နှိပ်မီးရောင် တဝင်းဝင်း မြင် ရ၏။ မမစိန် အဲသည်ဘက် ဘသူလာလဲ။ တွေ့မိလား။ မမစိန်က အိပ်မှုံစုံမွှား အသံနဲ့။ ဟဲ့ ဘသူမှ မလာဘူး။ နင်တို့တောင် ဘက် တံခါး ဆီ က တော့ ချွမ်း ကနဲကြားတယ်။ ညီမ နှစ်ယောက် တံခါးဆီ သွားကြည့်ကြသည်။အငယ်မက လက်ထဲမှာ ဝါးရင်းတုတ်ကြီးနှင့်။ သူတို့ညီအမက လှမ်းမေးတော့ မမစိန် က ငစိုး ကို သူမ စောင်ခြုံထဲ ဆွဲ သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ လှမ်း ထိုးလိုက်သော မီးရောင်ဖြှင့် မမစိန်၏ ဖြူဖွေး ကြီး မားသော နို့ကြီး နှစ်လုံးကို ငစိုး မျက် နှာနှင့် ကပ် လျက် မြင် လိုက် ရသည်။
ငစိုး မလှုပ်ဝံ့ပါ။ အပျို ညီအမ တရားခံကို မမိ၍ စိတ်လျှော့ ပြန်အိပ် သွားကြ ပေမဲ့ ငစိူးက တော့ မမစိန် စောင်ခြုံထဲမှာ ချွေးပြန်လျက်။ မမစိန်က သူ့ကို ရင် ခွင် ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး ကြောက်နေတုန်းဘဲလား။ မမကို ပြန်ဖက်ထားလေ တဲ့။ ပြောရင်း ငစိုးလက်ကို ဆွဲကာ သူမ ကိုယ်ပေါ် တင် ပေးသည်။ မမစိန် ကိုယ်ပေါ် အဝတ်အစားမရှိ။ အိပ်တုန်းက ရင် လျားထားသော လုံချည်သည် ကျွတ်ကျသွား သည်လား ချွတ်ချ လိုက်တာလား မသိ။ တုန်ယင်နေ သော ငစိုးလက်ကို သူမကဘဲ ကိုင်၍ သူမ ဖင်ကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ငစိုး မရဲ တရဲ လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်၏။
နွေးထွေး နူးညံ့သော် လည်း တင်းလှသည်။ မမစိန် က ငစိုးခေါင်းကို သူမ နို့ကြီး တွေကြားဆွဲ သွင်း ဖိကပ်လိုက်ပြန်တော့ ငစိုး ပါးစပ်က နို့သီးတ ခုနှင့် ထိ၏။ မစို့ရဲ။ မမစိန်ကဘဲ ပါးစပ်ပေါက် တေ့ ပေးပြန်သည်။ စို့လေ မောင် လေးရဲ့။ ဘာလဲ မကြိုက်ဘူးလား။ ခစ် ခစ် မင်းက မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လေးပေါ့။ မမစိန်က သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ပြီး ပေါင်ကြားကဟာ ကို ကျွမ်းကျင် စွာကိုင် သည် ။ ထ အောင် ဆွသည်။ အာ အား ။ ငစိုး လူးခါသှား၏။ ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်။ မမစိန်သည် ပေါင် တ ချောင်းကို ငစိုးပေါ်တင်ပြီး ငစိုးဟာကို သူမ ဟာထဲ ဘေးစောင်းမှာပင် ရ အောင် ထည့်ပေးသည်။
ထို့နောက် ငစိုးကို ပွေ့ဖက် လျက် ပက်လက်လှန် ရင်း သူမက အ ပေါ်က ရောက်စေ သည်။ တပ်လျက် ဝင် လျက် အ နေအထားမပျက်။ မမစိန် က အ ပေါ်က တက်လိုက်သဖြင့် ငစိုးဟာ က မမစိန်ဟာထဲအဆုံးထိမြုပ်ဝင် သွားပြီး ပိုကောင်း လာသည်။ မမစိန်က အရမ်းကို ကောင်းနေ အောင်ပေးသည်။ အ ပေါ်က ဆောင့်နေရင်း ဘေးတိုက် ၊ ပတ်လည် လှည့်သည်။ ငစိုးက မ နေနိုင် ၍ ပြန်ပင့်သွင်းတော့ ဟဲ့။ အသာငြိမ်နေ ။ မင့်က ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ မမ ကဘဲ လုပ်ပေးမယ် ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက် စိတ်တိုင်းကျ အပီအပြင် လုပ်ပေး၏။ အထိုင် ချိန်မှာ ငစိုးဟာကြီး တ ချောင်းလုံး မြုပ်ဝင် သွားသည် မှာ အောက် က ခုံတောင် လိုက်ဝင် မလို ထင် ရသည်။ ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ်။
အရမ်းကို ကောင်းနေ ပြီ။ မမစိန်က ငစိုးလက်တွေကို ဆွဲယူကာ သူမ နို့ကြီး တွေ ကိုင်ခိုင်း၊ အသီးလေးတွေကို လက်ညှိုးလက် မ ညှပ်၍ ဖွဖွ ချေစေသည်။ နှစ်ယောက်သား မ မျှော်လင့်ဘဲ တွေ့သောဂွင် မှာ အသည်းအသန် မီးကုန်ယမ်းကုန် ချစ်လိုက် ကြသည်။နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ငစိုးက အရင်၊ မမစိန်က နောက် ဆက်တိုက်ပြီး၏။ ငစိုးက ပြန်ခါနီး မမစိန်ကို တအားဖက် ကစ် ပေးရင်းမမရယ်။ မမသင် တာက ကိုပွကြီးသင် တာထက်အရမ်း အရမ်းကို ပိုကောင်းတာဘဲ။ ဟုပြောသည်။ မမစိန်က မျက်စောင်းထိုး၍ အော် ! မင့် မို့ပြောတတ်တယ်။ ဒီက လက်တွေ့ အရည်လည်အောင် ကိုယ်ဖိရင် ဖိ သင် ပေးရတဲ့ ဟာကို ခိခိ။ …ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လကျတှေ့ ပို့ ခသြူ